रोचक संसार  Hamrosandesh.com
धनी बन्न चाहनुहुन्छ भनि यी १० गल्ति कहिल्य नगर्नुहाेस्
२०७४ साउन २२ गते ४:३४
धनको दुःखबाट मुक्त गर्न चहानुहुन्छ भने यी १० गल्ति नगर्नुहोस् । १. महिलासँग दूश्मनी नलिनुहोस् । सन् २०१६ को सुरुवात शुक्रबारबाट हुँदैछ । शुक्र भौतिक सुखका कारक ग्रह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्रभाव रहनेगर्छ । यसैले शुक्र प्रधान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो...
सुहागरातमा पतिको सट्टामा देवर आएपछि….
२०७४ साउन २२ गते ४:२८
विहेपछि हरेक महिलाको सपना हुन्छ कि उनी आफ्नो श्रीमानसँग सौहार्दपूर्व वातावरणमा आफ्नो बाँकी जिन्दगी विताउ । तर, भारतको आगरामा एक विहे भयो र सुहागरातमै दुलहीसँग यस्तो व्यवहार भयो कि बताउँदा उनी काप्न थालिन् । यहाँ सुहागरातमा दुलहीसँग अप्राकृतिक सेक्सको प्रयास भयो र विरोध गर्दा...
तपाईले रातो केरा खानु भएको छ ?
२०७४ साउन २१ गते ४:२३
एजेन्सी । तपाइले पहेलो अथवा हरियो रङको केरा त धेरै देख्नु भयो होला ? खानु पनि भएको छ ।तर तपाईले कहिल्यै रातो रङको केरा खानु भएको छ ? वा देख्नु भएको छ ? अचम्म पर्नु भयो रातो रङको कोरा पनि हुन्छ भनेर ?हो रातो...
१८ वर्षपछि राहु र केतुले राशि फेर्दै: कुन राशी हुनेलाई लाभ, कुन राशी हुनेलाई खतरा ? जानुस्…
२०७४ साउन २० गते ७:५१
एजेन्सी – १८ वर्ष पछि भदौ १ गते राति ९ बजेर ३६ मिनेट जाँदा राहु, केतुले राशि परिवर्तन गरेर कर्कट र मकर राशिमा प्रवेश गर्दैछन् । यी दूईवटै गृहको राशि परिवर्तनले कर्कट र मकर राशि भएका व्यक्ति प्रभावित हुनेछन् । राहु, केतुले राशि परिवर्तन...
“म बाचेर आउन पाउ” भनेर साउदिको जेल बाट प्रधानमन्त्रीलाइ पत्र
२०७४ साउन २० गते ५:०५
आयको केहि दिन सम्म त काम र माम को कुनै ठेगाना भयन तर केहि दिन पछी भने नेपाल मा गरियको करार नाम भन्दा फरक भय पनि साउदिकै जाबिराह हायल सिमेन्ट कम्पनीमा ड्राइभर काम पायको थिय सायद मेरो लागी त्यो काम नै अभिसाप थियो होला...
अमेरिकी डाक्टरलाई ठूलो सफलता एड्सको औषधि पत्ता लाग्यो, गाइभित्रै यस्तो शक्ति !
२०७४ साउन २० गते ४:१७
एजेन्सी । हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार गाईलाई लक्ष्मी मानेर पूजा गरिन्छ । तिथी, श्राद्ध र चाडपर्वमा गाइको गहुँत र गोबरलाई पवित्र मानिन्छ । यो भन्दा पनि संसारकै खतरनाक रोग एचआइभीसमेत निको हुनसक्ने औषधीको खानी गाई नै भएको पुष्टि भएको छ । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताको अध्ययन अनुसार...
के हो टेस्टोनी ? कतै हाम्रो फेकवुक ह्याक त भैरहेको छैन ?
२०७४ साउन १९ गते १५:०७
काठमाडौं । अहिले फेसवुकमा एउटा कुरा भाईरल भईरहेको छ । फेसवुकमा अनुमानित भविष्यवाणी गरिहेको टेस्टोनी डट कम नामक वेवसाइट (एप) ले फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुलाई हसाइरहेको छ । माया प्रेम, विवाह, धन सम्पति देखि पार्टीगत कुराहरुको विषयमा समेत अनुमानित गरेर फेसवुक प्रयोगकर्ताहरुलाई रमाइले दिईरहेको छ ।...
कुन राशिसंग बिबाह गर्दा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? थाहा पाउनुहाेस्
२०७४ साउन १९ गते १४:५४
काठमाडौँ। बाह्र राशीका स्वभाव अलग अलग हुन्छन् । यी राशीका कारण व्यक्तिका स्वभाव र भविश्य निर्धारण गरिन्छ । राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिलाईत कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा । तपाईको राशीले निर्धारण...
२०७४ साउन १९ गते १०:४८
दुबै ओठ समान र सुन्दर हुने व्यक्ति सत्यप्रिय, सुशील तथा सज्जन वृत्तिको हुने गर्दछ । उसले कोमल शब्दले भरिएको मिठो वाणीको प्रयोग गर्दछ । यस्तो व्यक्ति परहितकारी तथा भाग्यशाली जीवन व्यतीत गर्ने हुन्छ । यहाँ ओठको बनावट र त्यसले मानिसमा पार्ने प्रभावका बारेमा चर्चा...
तामाको भाडामा बिर्सेर पनि पनि राख्नुहुन्न यी कुरा , विष हुन्छन्
२०७४ साउन १९ गते १०:४४
एजेन्सी । हामीले तामाको भाडोमा राखेको पानी प्रयोग गरेमा कतिपय रोग नलाग्ने भन्ने कुरा सन्दै आएका छौं । तर, कतिपय चिजहरु तामाको भाडामा राखेको खानेकुरा खाएमा स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकार कुने गर्छ । जुन चिजले विषको काम पनि गर्छ । कुन–कुन चिज तामाको भाडामा...
« अघिल्ला 12345 … 124 पछिल्ला »